Hyper dia mandefa hub vaovao roa ho an'ny 24-inch iMac | Avy amin'ny mac aho
Hyper dia mandefa hub vaovao roa ho an'ny 24-inch iMac
Hubs dia efa iray amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny mpampiasa Apple maro ary bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa Mac. Amin'ity tranga ity dia ivontoerana misy endrika mahaliana izy io ary koa izany izy ireo dia mampifanaraka ny loko eo alohan'ilay iMac vaovao anao miaraka amin'ny processeur M1.
Ka ireto mpikirakira vaovao ireto mifandray amin'ny USB C ao aoriana ny fitaovantsika vaovao ary manolotra ny mety hisian'ny seranan-tsambo eo alohan'ny fitaovana. Ny tsara indrindra amin'izany rehetra izany dia ny filazantsika fa manampy endrika tsy manam-paharoa sy manokana ho an'ny iMac vaovao miaraka amin'ny loko miloko izy ireo.
Amin'ity tranga ity, misy kinova roa amin'ny hub hub Hyper, ny iray misy fifandraisana 6 ary ny iray manana 5. Ny 6-in-1 HyperDrive dia vidin'ny $ 80 ary ny 5-in-1 HyperDrive dia lasa $ 50 isaky vondrona na inona na inona loko izay fidintsika. Ny tsara indrindra dia izany mifanentana tanteraka amin'ny endrika sy loko an'ny iMac anay.
Ny HyperDrive 6-in-1 manana:
Seranana HDMI HDMI1Hz
1 USB-C hatramin'ny 10Gbps
Ny HyperDrive 5-in-1 ampio ireto seranan-tsambo fifandraisana ireto:
Imbetsaka izahay no niresaka momba ny fampidirana ireo seranana amin'ny ampahany amin'ny alàlan'ny fanohanana eo aloha an'ny iMac na ny toa azy, tamin'ity fomba ity dia afaka nisoroka ny filàna ireo seranana eo aloha isika, fa raha ny lojika dia "voakitika ny endrika "ary tsy azon'i Apple atao izany. Ny fahamoran'ny fananana ny seranan-tsambo eo aloha dia manana ny olana amin'ny endrika "extra cost" miaraka amin'ireo hubs toa ireo na mitovy amin'izany, amin'izao fotoana izao dia tsy misy safidy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » Hyper dia mandefa hub vaovao roa ho an'ny 24-inch iMac
Yahoo Mail dia mitondra ny app iPad ho an'ny Macs miaraka amin'ny M1
Olana ho an'ny Apple Pay any Aostralia ny lalàna mifehy eo an-toerana